umshayeli ngamunye kwakufanele okungenani isikhathi ukuba sizibuze ukuthini, futhi kanjani deregister imoto.
Futhi kucace ngempela, kubonakala, inqubo iba ikhanda okuqhubekayo. Futhi zonke "ngiyabonga" wethu abanesibindi abasebenzi MREO.
Yiqiniso, neze ubani angafuna ukuchitha isikhathi sabo emi imigqa engapheli futhi ngiphakamisa ifolda onohlonze ngephepha, kodwa lokhu inqubo, futhi nalo nganoma isiphi isikhathi kanti akakwazi ukwenza lutho.
Ngakho kanjani ngendlela efanele deregister imoto?
Okokuqala, imoto ezincwadini kuphela ezimweni ezintathu: kuphakathi kokuthi ukusidayisa noma asisuse, noma athathe izwe lethu elikhulu.
Okwesibili, kuye ngokuthi ukususwa target, kanye nenqubo kuzohluka. Nakuba, uma ngikhuluma iqiniso, iphakethe, njengoba umthetho, yiba isithenjwa esifanayo, kodwa eyayihambisana ngaphezulu amacala ehlukene, kuye ngokuthi isizathu kokukhipha imoto ezincwadini.
Okwesithathu, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi idokhumenti ngayinye kufanele zithunyelwe hhayi kuphela yokuqala, kodwa ikhophi ngeduplikhethi.
Okwesine, uma unquma deregister imoto ngaphambi uhambo ngikugeze kahle. Lapho izimoto zihlolwe kancane iziphathimandla kuyoba izikhalazo emshinini ahlanzekile. Uma kungenjalo, kufanele ahlanze yokubhalisa amamaksi wodwa, kanye egumbini lenjini.
Okwesihlanu, ukuze asuse imoto ezincwadini, kumele uhlinzeke ngalokhu okulandelayo: Yebo, imoto uqobo; otkruchennye izinombolo kusengaphambili; PTS yokuqala bese ukopisha it (futhi zombili); iphasiphothi umshayeli; isitifiketi izindlela lobuchwepheshe zokuqopha; amandla ommeli futhi ikhophi (kuyadingeka kwasayinwa); isitatimende kanye kokuthola izinkokhelo.
Mhlawumbe abashayeli kungenzeka umbuzo wokuthi futhi kanjani deregister imoto kwenye esifundeni.
Uma, ukwenza isibonelo, wathuthela kwenye esifundeni ke kudingeka ukubeka ukubhaliswa kwakho imoto e kakhulu kule ndawo (eqinisweni, uma ufuna ukwazi kanjani ekususeni ukubhalisa imoto kwelinye idolobha ke ukusebenza uyofana ukuthi ngaphansi ukucatshangelwa). Okungukuthi, wena ebhekisela amaphoyisa womgwaqo basekhaya ngesaziso ekubekeni izimoto ku-akhawunti ngokuzenzakalelayo adubule it kusukela irejista endaweni lapho une-ke ekuqaleni eqoshiwe.
Eqinisweni, okufanayo kusebenza ukuthengwa: ngokubeka imoto kwi-akhawunti endaweni entsha, ngeke ngokuzenzakalelayo adubule it kusukela irejista endaweni efanayo lapho uhlala khona.
By endleleni, uma unquma ulethe imoto yakho phesheya, ngaphezu okungenhla izinombolo ezimbili imibhalo udinga ukwengeza ireferensi: irisidi ukuthi unikwa inombolo zokuthutha umphakathi okusansimbi a kwasayinwa amandla ummeli nezenzo ezenziwe esikhathini esizayo.
Futhi endabeni kabusha, uzodinga iqoqo kwemibhalo ukuze ungeze irisidi okuzokwenziwa bababonisa ukuthi ukhokhe imali isimo ngoba inkinga isitifiketi Liberate ilayisensi amayunithi.
Njengoba ubona, konke kulula kakhulu futhi elula, into esemqoka - ukuthola isikhathi ukuqoqa imibhalo futhi ukuvikela sako. Akukhona yini lula ukukhiqiza kwelinye idolobha noma isifunda, uma kukhona kudingekile kuphela amaphoyisa? Yiqiniso, lena umbono womuntu siqu, akasho iqiniso, kodwa ngezinye izikhathi kuvela ukuthi-ke kulula nje ukuze uthumele kuka ukukhiqiza ngokugcwele imiphumela.
Isifo sikashukela sokugonywa sikhulelwe ekukhutheni. Ukuxilongwa, ukubonakaliswa, ukwelashwa nokudla
Isifo senhliziyo: uhlu kanye nezimpawu, ukwelashwa